Taliska ciidanka Asluubta oo dhaqan celin u sameeyay caruur derbi jiif ahaa “Sawirro” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 28 May 2016
Taliska Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa Maanta sii daayey ilaa iyo 18 ka mid ah caruurtii Koola dhuuqa ahaa ee ku dayacnaa waddooyinka magaalada Muqdisho, kuwaasi oo Xabsiga dhexe ku qaatay 6 Bilood oo Dhaqan celin iyo Waxbarasho ah.
Sareeya Gaas Bashiir Maxamed Maxamed Jaamac Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay in Caruurtan Koorsada dhameystay loo qeybin Doonno ilaa iyo Saddex Qeybood oo kala ah :-
2- in qeyb ka mid ah Caruurtaasi la siin doonno Waxbarasho Diini iyo mid maaddi ah islamarkaana la bari doonno farsamada Gacanta .
3- qeybta soo hartay oo la siin doonno Lacago guno ah islamarkaana ay dib ula midoobi doonaan Qoysaskooda .
Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Gen. Bashiir Maxamed Jaamac ayaa sidoo kale sheegay in Ciidanka Asluubta uu dar dar galin doonno Dhaqan celinta loo sameynayo Caruurta Darbi jiifka ah oo ay dhawaan bilaabayaan Howgallo lagu soo Aruuranayo Ciyaalka koola dhuuqa ah ee Magaalada ku dayacan .
Dhalinyartani aya waxa goobta lagu gudoonsiyay lacago ay kusii gataan dhar oo ay kula laabtan familkooda, Si ay uga dhex muuqdaan bulshada caadiga ah.